အဆိုတော် ဟန်ထူးလွင် (ကျားပေါက်) က သူ့ရဲ့ ဗရုသုက္ခဗေဒ Episode2ဖြစ်တဲ့ Me and My… – PVTV Myanmar
အဆိုတော် ဟန်ထူးလွင် (ကျားပေါက်) က သူ့ရဲ့ ဗရုသုက္ခဗေဒ Episode2ဖြစ်တဲ့ Me and My Religion Part I ကို သူကိုယ်တိုင်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်နေတဲ့ 92.00MAMA မှာ ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ထားတာကို PVTV က ထပ်ဆင့်မျှဝေထုတ်လွှင့်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Like – 10K Share – 1103
2021-06-12 at 9:17 PM
လူတွေရဲ့ အသိစိတ်မှာ ငါဆိုတာကြီးကို မပျောက်ပျက်ချင်ဘူး ဆက်ပြီးတည်တံ့ချင်တယ် ပျောက်ဆုံးသွားမှာကြောက်တယ် အဲဒါတွေကြောင့် ဘာသာတရားတွေက တည်မြဲနေတာ လုပ်စားလို့ရနေတာ ဘာသာတိုင်းမှာ တည်မြဲခြင်းဆိုတာနဲ့မြူထားတယ် တကယ်တော့သေဆုံးခြင်းဆိုတာ အိပ်မက်မမက်ဘဲ အိပ်နေတဲ့ခံစားမူမျိုး မင်း ငါ သူဆိုတာမရှိတော့ဘူး next life ဆိုတာမရှိတော့ဘူး ဒါတွေကိုလက်မခံချင်လို့ ဘာသာတရားဆိုတာတွေထွန်းကားနေတာ
2021-06-12 at 10:12 PM
လေးစားပါတယ် … လူသားတိုင်း ယုံကြည်ရာကိုးကွယ်ခွင့် ရှိကြပါတယ် … ဘာသာတိုင်း ကောင်းကြပါတယ်… ဘာသာတရားကိုးကွယ်တဲ့ သူတိုင်းဟာလဲ လူကောင်း ဖြစ်ချင်တဲ့သူတွေ…လောကမှာ လူတိုင်း လူကောင်းဖြစ်ချင်ကြတယ် သို့သော်… လူဆိုးဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းမသိ အယူမှားခဲ့ကြသူတွေပါ…. သဘာ၀ကျပါတယ် …ကျောင်းသားတွေ အားလုံးစာတော်နေရင် အကုန် ဆရာ၀န် ဖြစ်နေကြမှာပေါ့… ဆိုက္ကားဆရာ ဘယ်သူလုပ်မှာလဲ…. ဒါကြောင့် လောကကြီးက သဘာ၀ ကျကျကို ဖန်တီးပေးထားပါတယ်… နောက်ဆုံးတော့ လူသားအားလုံး သေရမှာပါ အမှန်ဘဲ…
ThaToe Nyo says:
2021-06-12 at 11:20 PM
open mind ကို သဘောပေါက်သွားတယ်
2021-06-13 at 2:03 AM
all human are equal ====
Ko Kyaw Ko says:
2021-06-13 at 5:37 AM
Your topics is fair I m agree that, thank you , appreciated mate 👍🏼
Maythe San says:
I wish everyone in Burma especially young people are capable of thinking critically and analytically instead of following someone or some idea blindly.
ဝါး ေတာ္လိုက္ထာ ေလးစား
2021-06-13 at 9:06 AM
Nai Lynn says:
2021-06-13 at 10:30 AM
ဘေမရှိလို့ နားထောင်မှာလို မထောင်ဘူး လိုလိုနဲ့ နားထောင်လိုက်တော့ အဆုံးသတ် နှုတ်ဆက်စကား ပြောမှာကိုတောင် နှမြောမိတယ် လေးစားပါတယ် 🐅 ကျားပေါက်ရေ
Whatawonderful analysis . Thanks Ko Paul . Me too don’t want to write down about religion in my own ID .
Kaung Chit Khine says:
ဘာမှ မဟုတ်ဘူး။ အကျဉ်းချုံ့လိုက်ရင် ဗုဒ္ဓပြောသွားသလိုပဲ လူ၊ယောကျ်ား၊မိန်းမ စတဲ့ ပဉာတ်ချက်အစွဲတွေကို မခွာချနိုင်လို့ဆိုတာပဲ။
အာလုံး ရုပ် နဲ့ နာမ်။ (Physical & mental) လို့ပဲခွဲခြားပေးလိုက်တယ်။ နောက်ဆုံးခွဲပေးလိုက်တာက ရုပ်(Physical)ကိုတောင် အဆုံးထိ ခွဲပေးလိုက်သေးတယ်။ မာခြင်း ပျော့ခြင်း ပူခြင်း အေးခြင်း တွန်းကန်ခြင်း ဖိခြင်း ဓာတ်သဘောပဲကျန်တော့တယ်။
ဒါဆို ငါ သူတပါး ယောကျ်ား မိန်းမ ဆိုတာမရှိတော့ဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီလောက်အဆင့်ထိ နားလည်လက်ခံလေ့လာကျင့်သုံးတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ
ဒါကြောင့် Mr.Tiger Cubက စကားတွေ အရှည်ကြီးပြောပြနေရတာပါ။
အမှန်က ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်သော အချို့သောရဟန်းတော်တွေကိုယ်တိုင်တောင်မှ ဒီအချက်အတွေကိုသိသာသိပြီး လက်တွေမှာ စိတ်ထားတတ်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်မနေကြပါဘူး။
Nan Kham Mauon says:
2021-06-13 at 6:23 PM
Episode 1ကို ကြည့်ချင်လို့ပါ ရှာတာမတွေ့လို့
2021-06-13 at 7:12 PM
ကိုကျားပေါက်အနေနဲ့ ဒီမန့်ကို မြင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်
မြန်ပြည်မှာ ဘာကြောင့် မှတ်တင်မှာ ဘာသာရေး နာမည်တပ်ရသလဲဆိုတာ ကိုယ်လဲ စူးစမ်းတာကြိုက်တဲသူအနေနဲ့ လေ့လာသင့်ပါတယ် လွယ်လွယ် stupidလို့မပြောသင်ပါဘူး
ဘာကြောင့် ဘာသာရေး ကို မှတ်ပုံတင်မှာဖော်ပြရသလဲဆိုတော့ အမွေစားအမွေခံ ဥပဒေကြောင့်ပါ ဘယ်ဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူက ဘယ်လိုဘာသာရေးဥပဒေကို ခံစားခွင်ရှိလဲဆိုတာ မှတ်ပုံတင်လုပ်ကထဲက သတ်မှတ်ထားလိုက်တာပါ stupidမဟုတ်ပါဘူး ဒါကို လဝက ဝန်ထမ်းတောင်မသိပါဘူး
သိပ်ကြိုက်တဲ့ ယူဆချက်ဗျ လွတ်လပ်စွာ တွေးခေါ်ကိုးကွယ်ခွင့် လူတိုင်းမှာရှိရမယ်
2021-06-13 at 10:26 PM
ကိုကျားရဲ့ အတွေးအမြင် သုံးသတ်ချက်တွေကို
တိုက်တွန်းမှု့ မပါတဲ့ ဝေမျှချက် တွေမို့ လွတ်လပ်စွာ
Zin Linn Ko says:
ဒေါက်တာ တေဇဝန္တ says:
I agree with you. I love your speeches. I respect you who study and read the influence of religion throughly. But, I wanna say that Buddha is not justaphilosopher. And, I wanna add Buddha isadiscoverer and the one who practises what he has discovered.
Part II link pls?
Jasmine Aung says:
2021-06-15 at 4:55 PM
ခံ စား လို့ ရ တယ်
Proud of you ko kyar
Bo Lay says:
2021-06-16 at 4:08 PM
2021-06-17 at 12:05 PM
2021-06-19 at 9:27 AM
မြန်မာမှာရော၊ ကမ္ဘာမှာပါ အတွေးအခေါ်ဦးနှောက်ရှိတဲ့ လူမှန်သမျှ မင်းအောင်လှိုင်နဲ့အောက်ဆွဲတွေကို လက်မခံတာချင်း
အဘိဓမ္မာကိုလေ့လာပြီးသွားရင် မြတ်ဗုဒ္ဓကို ပိုပိုကြည်ညိုယုံကြည်လာတယ်
Htetmyat Oo says:
2021-06-25 at 11:30 PM
လေးစားတယ် ဗျာ ကိုကျား။ အတွေး​တွေ တူနေတယ်။
Decem Amber says:
2021-06-26 at 11:04 AM
Thank you ပါ 😃
Nay Zin says:
2021-06-27 at 4:58 PM
2021-06-27 at 4:59 PM
2021-06-27 at 5:00 PM
အေတာ္နီးေနၿပီ…စာလည္းဖတ္ ေတြးလည္းေတြးရင္းနဲ႔ တကယ့္ပေရာဖက္ဆာျဖစ္သြားလိမ့္မယ္….
ညီေလးျဖစ္မယ့္ပေရာ္ဖက္ဆာရဲ႕ဘဲြ႕ နဲ႔ ဝတ္ရမယ့္ဝတ္စုံကိုပါျမင္ၾကည့္မိတယ္…
တစ္ခ်ိန္ေတာ့ လူေတြေလးစားရတ့ဲပုဂိၢဳလ္တေယာက္ျဖစ္လာဦးမယ္ထင္တယ္ if you are going to walk on this way!!!
Pro Liar says:
2021-06-27 at 11:02 PM
2021-06-28 at 6:27 PM
Hnin Hnin Wai Myingyan says:
2021-08-01 at 2:18 AM